ပင်ကွင်းလေးအဖြစ် အားလုံးကချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ TWICE’s Mina လေးဟာ သူမရဲ့ နန်းဆန်တဲ့အလှနဲ့ တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့ပုံရိပ်လေးကြောင့် ထူးခြားတဲ့ အလှပိုင်ရှင်လေးပါ။ အထူးသဖြင့် သူမရဲ့ နှာတံထက်က မှဲ့နက်နက်လေးဟာဆိုရင် Mina ရဲ့ ပြယုဂ်လေးပါပဲ။ ထင်ရှားတဲ့မှဲ့လေးအပြင် Mina ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနားလေးမှာ မှဲ့လေး ၂ ခုရှိကြောင်း သတိထားမိကြရဲ့လား? ဒီမှဲ့လေးတွေကို debut မလုပ်ခင်တုန်းက JYP Entertainment ဟာ Mina ရဲ့ မှဲ့လေးကို ဖယ်ရှားပစ်စေချင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကော သိရှိပြီးသားလား?
ဒီအကြောင်းလေးကို Mina က Allure Korea မှာ ပြောပြခဲ့ပါ‌တော့တယ်။ အင်တာဗျူးမှာပဲ နှုတ်ခမ်းနားကမှဲ့လေးအကြောင်းကိုမေးတော့ Mina က အခုလိုလေးဖြေခဲ့ပါတော့တယ်။ “ပထမတုံးက company ကနေပြီး ဒီမှဲ့တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်မကတော့ ဒီမှဲ့လေးတွေနဲ့အတူ ပွဲဦးထွက်ခဲ့တာပါပဲ။ လူတွေက ကျွန်မနှာခေါင်းနားက မှဲ့လေးကို ပိုပြီးသိကြပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မှဲ့လေးတွေကို ချစ်ပါတယ်” ဆိုပြီး ဖြေပေးခဲ့ပါတော့တယ်။
ပရိသတ်တွေကလည်း TWICE’s Mina ရဲ့ မှဲ့လေးတွေကို သဘောကျနေကြပါတယ်။ Mina ရဲ့ အလှနဲ့ဆွဲဆောင်မှုမှာ ဒီမှဲ့လေးတွေက နောက်ထပ် အလှထပ်‌ဆောင်းလေးတွေပါပဲ။ ဒီမှဲ့တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ JYP က ဘယ်လိုများတောင် အကြံပေးခဲ့ပါလိမ့်နော်။
Next Bow နဲ့တွဲတုန်းက လွန်စွာမှစိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရကြောင်း လူသိရှင်ကြားဖွင့်ပြောခဲ့တဲ့ Mik Thongraya »
Previous « ဆန်းပြားတဲ့ဇာတ်လမ်းသစ်ကို အတူရိုက်ကူးဖို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ Dilireba နဲ့ Lay Zhang
Taylor Swift ကို​ ကျော်တက်ပြီး Billboard သမိုင်းတစ်​​လျှေုာက် အမြင့်ဆုံး စံချိန်သစ်တင်လိုက်တဲ့ BTS